सामुदायिक रेडियो जनताको सारथी कहिले बन्ने ? – सुदूर दर्पण
सामुदायिक रेडियो जनताको सारथी कहिले बन्ने ?
फागुन,१अछाम : सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियोबीच फरक छुटिने नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालहरुले बताएका छन । आज बिश्व रेडियो दिवशको अवशरमा पत्रका संग बोल्दै केहि सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
अहिले सबै रेडियोलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा सामुदायीक रेडियोको मर्म र कर्मलाई सम्वोधन नगरिनुलाई रेडियोको दिगोपनासँग पनि जोड्न थालिएको सँचार माध्यममा आबद्ध संचारकर्मिहरुले बताएका हुन ।
आमसञ्चार नीतिमा सार्वजनिक,सामुदायिक र व्यापारिक प्रसारणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विस्तृत रूपमा ऐन्मा आउने भनिए पनि हालसम्म आएको छैन । ऐनमा प्रसारण प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बेलाबेलामा सरकारलाई आफ्नो मागबारे जानकारी गराउँदै पनि आएका छन् । नेपालमा हाल साढे ३ सय भन्दा बढी सामुदायीक रेडियो संचालनमा छन् ।
महिला, कृषि, सीमान्तकृत समुदाय लगायत विषयगत क्षेत्र केन्द्रित रेडियोलाई विशेष सहुलियतको माग पनि भइरहेको छ । सामुदायिक रेडियोका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारीमा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ ।
सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका फ्रिक्वेन्सीलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा अठार वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्ने नीतिमा छ । सामुदायिक रेडियोको बारेमा सम्वोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि छुट्टै ऐन ल्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
यस्तै अछाम जिल्लाका सामूदायिक रेडियोहरुले पनि समाजको यथार्थपरक कुराहरुलाई उठाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन । रेडियोहरुले अहिले राजनितिक आस्थाका भरमा पत्रकारीता गर्ने क्रम बढेको भन्दै रेडियोहरुले स्वच्छ पत्रकारीता गर्नुपर्ने बताएका हुन । समाजका बास्तबीक दिनदुखिका समस्याहरु सामुदायिक रेडयोहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका हुन ।
यसैबिच सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले समुदायका आवश्यक्तालाई पहिचान गरेर सामुदायिक रेडियोहरूले बिषय वस्तुको उठान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा रेडियो गाउँघर मार्फत शुभकामना दिदै समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा आफना गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोडदिनु भएको छ ।
स्थानीय सरकार र रेडक्रस बिच समन्वय हुन आवश्यक छ : प्रमुख बोहरा